Iimidlalo ezingama-25 ezidumileyo zeLinux | Ubunlog
ubunlog | | Imizobo, Imidlalo, Linux, Ubuntu
Andinguye umdlali weqonga nangayiphi na indlela, nditsho nomdlalo we-solitaire, kodwa eli nqaku livele ngaphakathi INquirer EN Yatsala umdla wam, kuba bendingazi ukuba baninzi kakhulu umgangatho olungileyo, ndiyabelana nawe.
Ngenxa yokuba abantu ikakhulu benengxaki yabo yokuqala yokufudukela kwiLinux ngumxholo wemidlalo, siza kukushiya uluhlu oluneenkcukacha zemidlalo esiyigxininisayo ukubonisa ukuba iLinux nayo inokudlalwa kakuhle. Masivuye kancinci ngeCawe emva koko.
Imidlalo esiyicebisayo ikakhulu yi-3D kwaye iyinzalelwane yeLinux, ngaphandle kokuqhuba iwayini okanye okufanayo. Yimidlalo esemgangathweni kwaye uninzi lwayo luphumelele imbasa kwaye yavela kwimagazini.
Uluhlu lwemidlalo luvulekile, unganegalelo kwimidlalo emininzi kwaye siya kubongeza kancinci kancinci. Okwangoku ndicebisa oku kulandelayo: Idabi le-Wesnoth, i-Nexuiz, Umkhosi waseMelika, iiNgingqi zoTshaba: Iinyikima, Ukuxhalaba, Ihlabathi lePadman, iTux Racer, iVendetta, iAlien Arena 2007, iTerror Terror, iTale entlango, uBomi besibini, iSavage 2, iWarsow, TrueCombat: Elite, Frozen Bubble, TORCS (The Open Racing Car Simulator), Flight Gear, Frets on Fire, 3D etshisiweyo, ManiaDrive, WarZone 2100, Spring, Battle Tanks kwaye ekugqibeleni: Excalibur: Morgana's Revenge v3.0. XNUMX.
Siza kunika inkcazo emfutshane nganye nganye kunye nekhonkco eliya kumaphepha asemthethweni, sicacisa ukuba iodolo yazo ayibonisi ukubaluleka okukhulu okanye okuncinci:
Ngumdlalo wexesha-lokwenyani, onokukhetha kubadlali abaninzi. Umdlalo udlulise ukukhutshelwa kwesigidi esinye ukusukela ngo-2003 kwaye uyafumaneka ngeelwimi ezingama-35 ezahlukeneyo.
Ngumdlalo wohlobo lweFPS (uMntu wokuqala wokuDubula), okhululekileyo kwaye uvumela ukuya kuthi ga kubadlali abangama-64 ukuba badlale kwi-Intanethi, ikwavumela ukwenziwa kweebhot kwaye inenkqubo yokukhanyisa enamandla ebonelela ngomgangatho obonakalayo obalaseleyo.
Yifowuni yesitayile somdlalo weqhinga leFPS kunye nezinto ezinje. Ngokuka GameSpy, yayinomndilili wabadlali abangama-4.500 2002 phakathi kuka-2005 ukuya ku-XNUMX.
Ummandla Wotshaba: Iimfazwe Zenyikima
Ngumdlalo ofanayo okhoyo kwiWindows, enemephu apho unokusebenzisana ngokukhululekileyo, lawula izithuthi, njl. Ngo-2006 kwathiwa igama lomdlalo wabadlali abaninzi kwi-Intanethi ngexesha le-E3.
Ngumdlalo weqela le-FPS apho abantu balwa nabaphambukeli, iyafana kakhulu neQuake 3 kunye neHalflife.
Ngumdlalo wokubaleka wasentsomini apho uTux atyibilika kwikhephu, buqu ngumdlalo awayewusebenzisa ukuvavanya ukukhawulezisa i-3D kwenkqubo.
Ihlabathi lePadman ngumdlalo wasimahla osebenzisa injini yeQuake III ngobugcisa bekhathuni.
Yimodeli yesiphekepheke kunye neMMORPG, yasimahla kuhlobo lwayo lokulingwa.
I-Alien Arena ngo-2007
Ngumdlalo wasimahla onoyilo olufanayo ne-Quake, imidlalo ye-FPS, edlalwayo kwiWindows, iLinux kunye neFreeBSD.
Kukuguqulwa komdlalo weQuake III owenza umdlalo ophuculweyo ohlaziyiweyo ukuze ube ngumncintiswano olungileyo weCounter-Strike, ukuya kwinqanaba lokuba ixhase isoftware yePunkbuster-anticheats software kunye nokunye okunje.
Ngumdlalo apho inyani yenyani yenziwe kwaye isekwe ekudaleni uluntu, ukukhula koqoqosho endaweni yokulwa okanye iimfazwe.
Ubomi be sibini
Akukho nto ingako siyithethayo ngalo mdlalo, njengoko kusaziwa, inyani eyenziweyo yenziwe kwaye abantu bazenzela isimilo sabo.
Ngumdlalo weWoW, osimahla ukudlala ikhompyuter enye kodwa ukudlala kwi-Intanethi kuya kufuneka wenze intlawulo enye.
Ngumdlalo wasimahla we-3D FPS osekwe kwiinjini yeQFusion 3D. Ngumdlalo owenziwe ngabadlali, wabadlali, ekufunwa kuwo kukungxama kunye nesantya kumdlalo, awubonakalisi miphumo mihle.
Lo mdlalo uguquko olupheleleyo lomdlalo iWolfestein: Iimfazwe zenyikima, kwaye isimahla, inokudlalwa kulo naliphi na iqonga.
Ngumdlalo oqhelekileyo wePuzzle yePuzzle kwi-Linux, umlutha kakhulu kunye nabadlali abaninzi, kunjalo simahla.
I-Car Racing Simulator evulekileyo
Yimultiplatform evulekileyo ye-OpenGL yemoto yeemoto eneemoto ezingama-50, imijikelezo engama-20 kunye neninzi yedatha yokulinganisa, enjengomoya, ukonakala kwezithuthi ...
I-simulator yendiza ehamba phambili kakhulu, efikelela kumanqanaba anjengeMicrosoft Flight Simulator.
Inguqulelo yomdlalo ofanayo neGuitar Hero, kodwa endaweni yesigingci, sinamaqhosha eF1 -> F5 ukucinezela isingqisho somculo. Umlutha kakhulu kwaye simahla.
Ngumdlalo osekwe ekujikeni apho kuya kufuneka udubule usebenzisa izixhobo, isimbo seGorillabas kodwa kwilizwe le-3D apho kuya kufuneka uthathele ingqalelo amandla, i-engile kunye nokuziqhelanisa nokutshabalalisa iithagethi. Isisa.
It is a clone of the mythical game Trackmania, apho ukuqhuba kuxutywe kunye neesekethe ze-acrobatic. Isimahla kwaye inendlela yabadlali abaninzi.
Sisicwangciso-qhinga kunye nomdlalo weqhinga ngexesha lokwenyani, elifana kakhulu noMhlaba 2150 kunye neeyunithi ze-3D.
Ngumdlalo weqhinga ojolise kwimowudi yabadlali abaninzi apho kufuneka woyise iintshaba zakho.
Umdlalo wabadlali abaninzi ngeendlela ezi-2 ezinokubakho, zonke ngokuchasene nazo zonke okanye imo yokubambisana, ungadlala abantu aba-2 kwiscreen sokuqhekeka kwikhompyuter efanayo nakwi-LAN. Ngamaqela amaninzi.
I-Excalibur: Impindezelo kaMorgana v3.0
Ngumdlalo we-adventure womntu wokuqala omele inqanaba lomzobo ophezulu kunye nezandi ezikumgangatho ophezulu.
Okwangoku koku kukhona kude kube sonke sinegalelo elingaphezulu I-Linux ayiloqonga lokudlala kuba uninzi lwabaphuhlisi basebenzisa ii-API zeMicrosoft ze-Direct3D, hayi kuba ayinakudlalwa kwiLinux, njengoko olu luhlu lufutshane lubonisa. Yonwabele imidlalo ukuba ubungayazi kwaye ndiyakukhuthaza ukuba uthathe inxaxheba ngokubonakalayo ekwenzeni igalelo ngakumbi ukuze wonke umntu eluntwini abazi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » software » Imizobo » Iimidlalo ezingama-25 ezidumileyo zeLinux
Conky, ukuseta kwam
Yintoni le linux? Kutheni usebenzisa i-linux?